April | 2008 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli
ပျံလွန်တော်မူသည့် သာသနမောဠိ ပဓာနစေရ၊ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးကောဝိဒ၏ ဂုဏ်ရည်တို့ကို ရည်မှန်းပူဇော်သည့် ကုသိုလ်ပြုပွဲများ ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ရပ်နီး ရပ်ဝေးက တကာ၊ တကာမများကို သာသနမောဠိ အဖွဲ့ချုပ် ပြန်ကြားရေးက မေတ္တာရပ်ခံချက် ထုတ်ပြန်
ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၀၈
ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူသည့် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးကောဝိဒဘိဝံသကို ရည်မှန်းပူဇော်သည့် ကုသိုလ်ပြုပွဲများကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင်ဖြစ်စေ၊ စေတီကျောင်းကန်တို့တွင်ဖြစ်စေ ယခုလာမည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တို့တွင် ပြုလုပ်ကြပါရန် သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က မေတ္တာရပ်ခံချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အန္တိမဈာပန အစီအစဉ်ကို ပြည်တွင်းရှိ တပည့်သံဃာများ၊ တကာ တကာမများမှ အဆင့်ဆင့် မေးမြန်းစုံစမ်းကြကြောင်း၊ ပြည်ပရှိ ရဟန်းရှင်လူတို့ကလည်း ရောက်ရှိရာ နေရာက ကုသိုလ်ယူ ဆောင်ရွက်လိုကြကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ရပ်နီး ရပ်ဝေးက မြန်မာမိသားစုများအနေဖြင့် အနီးရှိ ဘုရားကျောင်းကန်၊ ဆရာသံဃာတို့ထံတွင် ဆရာတော်ကြီးကို ရည်မှန်းပူဇော်သည့် တတ်စွမ်းသော ကုသိုလ်ပြုပွဲများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းလိုက်ပါကြောင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဆရာတော် ဦးဂုဏိသရ၊ ပြန်ကြားရေး ဆရာတော်များဖြစ်သည့် ဦးပညာနန္ဒနှင့် ဦးဥာဏိကတို့က မိုးမခသို့ မိန့်ကြားရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
မိမိတို့ပြုမြဲ ပြုနေကြ ကုသိုလ်အစီအစဉ်တို့တွင်လည်း ဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးနှင့် ဂုဏ်တော်တို့ကို ရည်မှန်းပူဇော်သည်တို့ကို တပြိုင်နက်တည်း ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါကြောင်း ဆရာတော်တို့၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကြေညာချက်ကို သည်မှာ ဖတ်နိုင်ပါပြီ။
Posted by maungyit on April 30, 2008 in Overseas News Headlines
တိုင်းရင်းသားပၝတီမဵားက အေူခခံဥပဒေ မူုကမ်းကို ဆန့်ကဵင်ေုကာင်း
အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်သူက ဆန့်ကျင်ကြရန် တိုင်းရင်းသားပါတီများက အလေးအနက်တိုက်တွန်း၊ စစ်အစိုးရမဲစာရင်းကို စောင့်ကြည့်ရေး ပြင်ဆင်စေလို
မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၉
ပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီရေး တိုက်ပွဲဝင်မျိူးဆက်သစ် အစုအဖွဲ့များက ကန့်ကွက်မဲထည့်ကြရေး၊ ကြက်ခြေခတ်ကြရေး အရှိန်အဟုန်မြင့် ဆောင်ရွက်နေချိန်၊ စစ်တပ်ကလည်း ကန့်ကွက်မဲ လှုပ်ရှားမှုများကို အကြမ်းဖက်ပြီး မင်းမဲ့စရိုက် တိုက်ခိုက်နေချိန်၊ ပြည်သူလူထုကိုလည်း ထောက်ခံမဲထည့်ရေး စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အစိုးရ သတင်း စာနယ်ဇင်းနှင့် အလိုတော်ရိများက အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက် ဖိအားပေးနေချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေး ပါတီများက တခဲနက်စုစည်းကြလျက် ပြည်သူများသို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက် တရပ်ကို ဧပြီလ ၃၀ ရက် နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
စစ်အစိုးရ အတည်ပြုမည့် တရားမ၀င်သော အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်သူက ဆန့်ကျင်ကြရန်၊ ကန့်ကွက်သည့်ကြားမှ စစ်အစိုး မဲစာရင်းများ ပြုစုနေချိန်တွင် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူအားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ကြည့်ကြရန် အလေးအနက်တိုက်တွန်းထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့က အလားတူ သဘောထားရှိကြောင်း သတင်းဌာနများတွင် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားပါတီများက စုစည်းညီညွတ်သည့် ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သည်နေရာက သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
Posted by maungyit on April 30, 2008 in Local News Headlines
Aung Din – May 10 Road Maps
ဧူပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈
၁ – ကဵနော်တိုႛအားလုံး No
၂၀၀၇ ခိုံစ်ြရဲႛုသဂုတ်၊ စက်တင်ဘာလမဵားက အစူပခြဲ့တဲူ့မန်မိာိုံင်ငူံပည်သူမဵားရဲႛ ရေဝြၝရောင်တော်လန်ြရေးဋ္ဌကီးက ဒီကနေႛအထိ အရြိန်အဟုန်ူမင့်မားစြာနဲႛ ခဵီတက်နေဆဲပၝပဲ။ စစ်အာဏာရင်ြတေရြဲႛ အုကမ်းဖက်တုံႛူပန်မမြဵားအောက်မြာ ဒူးမထောက် ဦးင်္မီတ်ြပဲ လမ်းခြဲခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်မဵားကိုေုကကြဲစြိာံတ်ြဆက်၊ အိပ်မက်အသစ်တေမြေးဖြား၊ အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်မဲ့ ခင်ဗဵားတိုႛရဲႛ လက်မဵားဟာ သန်မာနေဆဲ၊ ခင်ဗဵားတိုႛရဲႛ ရင်ခုန်သံတေဟြာ ရဲရင့်ြေိံးထြေးနေဆဲ၊ ခင်ဗဵားတိုႛရဲႛ မ္တွော်လင့်ခဵက်မဵားက လတ်ဆတ် တောက်ပနေဆဲ၊ူမန်မိာိုံင်ငံ ဒုတိယလတ်ြလပ်ရေးတိုက်ပြဲရဲႛ အောင်ပန်းကို မုကာခင်မြာ ခင်ဗဵားတိုႛ ဆင်ူမန်ိးိုံင်ုကတော့မယ် ကဵနော်ယုံကည်မိပၝရဲႛ။
၁၉၈၈ ခိုံစ်ြကစခဲ့တဲ့ အုကမ်းမဖက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လူထုလပ်ြရြားမဋ္ဌြကီးဟာ အိံစြ် ၂၀ ထဲကို ရောက်ရြိလာသလို လူထုတိုက်ပၝဲရဲႛ ပုံသဏ္ဒာန်ဟာလည်းေူပာင်းလဲခဲ့ပၝ္ဘပီ။ ဒီကနေႛ ဒီအခဵိန်မြာ ကဵနော်တိုႛဟာ ဒီမိုကရေစီရေးလပ်ြရြားမြုကီးရဲႛ အထဋ်ြအထိပ်တိုက်ပြဲကို ရောက်ရြိနေပၝ္ဘပီ။
စစ်အာဏာရင်ြတေကြ တိုင်ူးပည်ကို ရာသက်ပန်အုပ်ခဵပြ်ိုံင်ဖိုႛအတကြ် သူတိုႛစိတ်တိုင်းကဵ ရေးဆြဲထားတဲူ့မန်မိာိုံင်ငံ စစ်ကဋ္ဋန်ူပရြေးဥပဒေကို တဖက်သတ်ူပှူာန်း အတည်ူပဖြိုႛုကြိးစားနေပၝ္ဘပီ။ ဒီပြဲမြာ သူတိုႛအောင်ူမင်ခဲ့ရင် ကဵနော်တိုႛရဲႛ ၁၉၉၀ ရြေးကောက် ပြဲရလဒ် ထာဝရ ဆုံးရြံးရတော့မယ်။ စစ်အာဏာရင်ြစနစ်ဟာူမန်မိာိုံင်ငံမြာ တရားဝင်ူဖစ်လ္ဘာပီး ကဵနော်တိုႛူပည်သူတြေ သားစဉ်ေူမးဆက် စစ်ကဋ္ဋန်ဘ၀ ရောက်ုကရတော့မယ်။ ဒီမိုကရေစီ၊ လူႛအခငြ့်အရေးနဲႛ တိုင်းရင်းသားလူမဵြိးစုမဵားအရေးတေဟြာ စစ်ဖိနပ်မဵားအောက် မြာ နာကဵင်ုကရတော့မယ်။
စကားတခုကားဖူးပၝတယ်။ “တိုက်ပြဲပုံသဏ္ဒာန်ကို ရန်သူက ဖန်တီး္ဘပီး တိုက်ပြဲရဲႛအရြိန်အဟုန်က ညီင်္ီတ်ြမကြို တည်ဆောက် ပေးတယ်“ တဲ့။ ဘယ်သူဘယ်ဝၝကေူပာခဲ့သလဲ မမတ်ြမိတော့ပၝ။ ဒၝပေမယ့် ကဵနော်တိုႛအတကြ် သိပ်ကိုမန်ြကန်တဲ့ စကားပၝပဲ။ နအဖက သူတဖက်သတ် ရေးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲနဲႛ အတည်ူပမြယ်လိုႛ ရေကြးေုက်ာလိုက်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုမဵား အတကြ် တိုက်ပြဲပုံသဏ္ဒာန်ကို ဖန်တီးပေးလိုက်တာပၝပဲ။
“ူမန်မာူပည်ကို ရာသက်ပန် အုပ်ခဵပ်ြတော့မယ်ဟေ့” လိုႛ စစ်ဘီလူးမဵားက ရေကြးေုက်ာလိုက်တာဟာူမန်မာူပည်သူလူထုကို စစ်ေုကူငာလိုက်တာပၝပဲ။ စိန်ခေၞလိုက်တာပၝပဲ။ ဒီစိန်ခေၞမကြို ကဵနော်တိုႛ ရင်ဆိုင်လိုက် ပၝတယ်။
စစ်အာဏာရင်ြစနစ်ကို လုံးဝ(လုံးဝ) အလိုမရြိဘူးလိုႛူမန်မာူပည်သူတေကြ ၁၉၉၀ ရြေးကောက်ပြဲမြာူပတ်ူပတ်သားသားေုကူငာခဲု့ကသလို၊ အခုလာမယ့် မေလ လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာလည်း ထပ်မူံပတ်ူပတ်သားသားေုကူငာုကမြာပၝ။ နအဖရဲႛ စစ်တပ်အကဵြိူးပြ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကိုပည်သူလူထုကူပတ်ူပတ်သားသား ကန်ႛကကြ်ုကမြာပၝ။
ဒီတိုက်ပြဲဋ္ဌကီးရဲႛ အရြိန်အဟုန်က ဋ္ဌကီးမားလနြ်း္ဘပီး ကဵနော်တိုႛတိုင်ူးပည်ရဲႛ ကုံကမ္ထာကို အဆုံးအူဖတ်ပေးရမယ့် အေူခအနေမဵြိးမိုႛ ကဵနော်တိူႛ ညီင်္ီတ်ြလာုကပၝ္ဘပီ။ ကဵနော်တိုႛအားလုံူးပည်တငြ်ူးပည်ပ ဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေး၊ အရောင်တြေ ဘယ်လိုပဲကြဲကြဲ၊ အဖြဲႛအစည်းတြေ ဘယ်လိုပဲမဵားမဵား၊ စစ်အုပ်စုရဲႛ မိစ္စာခေဵာက်ကမ်းပၝးဋ္ဌကီးထဲကို ကဵဖိုႛ တည်းတည်းလေူးဖစ်နေတဲ့ ကဵနော်တိုႛအမိေူမကို ကယ်တင်ဖိုႛ ကဵနော်တိုႛ ညီင်္ီတ်ြလာုကပၝ္ဘပီ။
ိံစ်ြပေၝင်းမဵားစြာ ကဵနော်တိုႛ အားမလိုအားမရူဖစ်ခဲ့ရတဲ့ အမဵြိးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႛခဵပ်ြရဲႛ ခေၝင်းဆောင်ဋ္ဌကီးမဵားကလည်း ဒီအူမင့်မား ဆုံးတိုက်ပြဲမြာ ရဲရဲရင့်ရင့် ရြေႛတန်းကရပ်လိုႛ၊ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမြာမြ မြေးဖြာုးကတဲ့ လူငယ် ကေဵာင်းသားကလေးတေကြအစ လက်ိံစြ် ဖက်ကိုကက်ေူခခတ်လိုႛ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းမဵားနဲႛ တပ်မတော်သား မိသားစုဝင်မဵားကအစ “No” လိုႛ တဖဖြ ရေရတြ်ုကလိုႛ၊ တိုင်းရင်းသားလူမဵြိးစုမဵားကလည်း “No“၊ူပည်ပရောက်ူမန်မာမဵားကလည်း “No” ၊ ဆရာတော် သံဃာတော်မဵားကလည်း “No” ၊ နံမည်ကေဵာ်အိုံပညာရင်ြမဵားကလည်း “No” ၊ ကဵနော်တိုႛအားလုံးရဲႛ တညီင်္တီတ်ြတည်း ရေကြးေုက်ာသံက “No” ၊ စစ်တပ်ရဲႛဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကိုလည်း “No” ၊ စစ်တပ်ကိုလည်း “No” ၊ မတရားတဲ့ အုပ်စိုးမမြန်ြသမ္တွကိုလည်း “No” ၊ ဒီထက်ရငြ်းတာ မရြိုံင်တော့ပၝဘူး။
၂ – နအဖရဲႛေူခလမြ်းမဵား
ဗိုလ်သန်းရေခြေၝင်းဆောင်တဲ့ နအဖစစ်အုပ်စုဟာ မတရားမမြဵားနဲႛ တည်ဆောက်ဖြဲႛစည်းထားတဲ့ မိစ္စာတေပြၝ။ တခဵြိႛက “ဗိုလ်သန်းရေကြ ဆိံ္ဋခံယူပြဲကို သေသေခဵာခဵာ တက်ြဆူပင်ဆင်ူခင်း မရြိပဲ ခေၞယူလိုက်တာ” လိုႛ တက်ြဆုကပၝတယ်။ ဘယ်လိုပဲူဖစ်ူဖစ်ူပည်သူႛဆိံ္ဋ ခံယူပြဲကို ၂၀၀၈ ခိုံစြ် မေလမြာ ခေၞယူဖိုႛေုကူငာတာနဲႛ တ္ဘပိင်ြတည်းမြာပဲ ရြေးကောက်ပြဲအသစ်ကို ၂၀၁၀ မြာ ကဵင်းပဖိုႛေုကူငာတာ ဟာူဖင့် ဒီအတုအယောင် ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို အတင်းအဓမ္ထ အတည်ူပဖြိုႛ စစ်အာဏာရင်ြမဵားက ပိုင်ူးဖတ်ထားေုကာင်း သိသာ ထင်ရြားတဲ့ အထောက်အထားပၝပဲ။ စစ်အုပ်စုဟာ ၂၀၀၈ မေ ဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ ဘယ်လိုနည်းနဲႛူဖစ်ူဖစ် အိုံင်ရအောင်ုကြိးစားမြာပၝ။
နေႛစဉ်ထုတ်သတင်းစာတေမြာ ရေဒီယိုနဲႛ ရုပ်ူမင်သုံကားမြာူပည်သူလူထုကို ထောက်ခံမဲပေုးကဖိုႛ အဋ္ဌကီးအကဵယ် စည်းရုံးနေပၝတယ်။ နေရာဒေသ အြိံႛအူပားမြာလည်း ဆိုင်းဘုတ်ဋ္ဌကီးတြေ ထောင်္ဘပီး ထောက်ခံမဲ ပေးခိုင်းနေပၝတယ်။ နအဖရဲႛ ၀န်ဋ္ဌကီးတြေ၊ ၀န်ကလေးတြေ၊ ဗိုလ်ခဵပ်ြတြေ နေရာအြိံႛအူပားကို သြား္ဘပီး္ဘခိမ်းေူခာက်လိုက်၊ လညြ့်ဖဵားလိုက်၊ လာဘ်ထိုးလိုက် လုပ်နေတာကတော့ မုကားခဵင်မြ အဆုံးပၝပဲ။ တခဵိန်တည်း တ္ဘပိင်ြတည်းမြာပဲူပည်သူလူထုကို ကန်ႛကက်ြမဲပေးဖိုႛ ဦးဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့ အဖြဲႛခဵပ်ြအဖြဲႛ၀င်တြေ၊ ၈၈ မဵြိးဆက် ကေဵာင်းသားတြေ၊ူပည်သူႛလတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြတေဟြာူဖင့် နအဖ ငြားရမ်းထားတဲ့ေုကးစားလူမိုက်မဵားရဲႛ တိုက်ခိုက်မအြောက်မြာ နာကဵင်ုက၊ ဒဏ်ရာရုက၊ အဖမ်းအဆီးခုံကရနဲႛ ။
နအဖက ဒီဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို လယ်ြလယ်ြကူကူ အတည်ူပြိုံင်ရေးအတကြ် လိုအပ်တဲ့ ထောက်ခံမဲ ပမာဏကိုလည်ူးမင့်ူမင့် မားမား မသတ်မတ်ြထားပၝဘူး။ ဒီဖြဲႛစည်းပုံကို နောင်တခဵိန်မြာူပန်ူပင်မယ်ဆိုရင် လတ်ြတော်မြာ ၇၅%ကေဵာ် ထောက်ခံမဲနဲႛ လူထုဆိံ္ဋခံ ယူပြဲမြာ ၅၀%ကေဵာ် ထောက်ခံမဲ လိုမြာူဖစ်ပေမယ့် ဒီဖြဲႛစည်းပုံကို လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ အတည်ူပဖြိုႛအတက်ြတော့ မဲပေးပိုင်ခငြ့်ရြိသူ အားလုံးရဲႛ ၂၅%ကေဵာ်သာ လိုအပ်မြာူဖစ်ပၝတယ်။ ဒီကနေႛူမန်မိာိုံင်ငံလူဦးရေကို ၅၆ သန်းလိုႛ ခန်ႛမနြ်း္ဘပီး မဲပေးပိုင်ခငြ့်ရြိသူ ၃၂ သန်းလိုႛ ခန်ႛမနြ်းတဲ့ အတကြ် ဒီဖြဲႛစည်းပုံကို မဲပေးပိုင်ခငြ့်ရြိသူ ၈ သန်းကေဵာ်လောက်က ထောက်ခံရုံနဲႛ အတည်ူပမြာပၝ။
ဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ ကန်ႛကက်ြမဲပေးမြာ သေခဵာသလောက်ရြိတဲိုံ့င်ငံသား တော်တော်မဵားမဵားဟာလည်း မဲပေးခငြ့် မရုကပၝဘူး။ အခုပလြုပ်ခဲူ့ပလြုပ်နေဆဲူဖစ်တဲ့ ထိုင်း၊ စကဿာပူ၊ မလေးရြား အစရြိတဲူ့ပည်ပိုံင်ငံမဵားမြာရြိတဲူ့မန်မာသံရုံးမဵားက ဋ္ဌကိတြင်မဲဆိံ္ဋပေးပြဲမဵားကို လေ့လာုကည့်မယ်ဆိုရင်ူပည်ပရောက်ူမန်မိာိုံင်ငံသား အမဵားစု၊ အထူးသူဖင့် ထိုင်ိးိုံင်ငံမြာဆိုရင် တသန်းကေဵာ်ဟာ မဲပေးခငြ့် ဆုံးရြံးနေတာ တြေႛရပၝတယ်။
ူပည်တငြ်းမြာလည်း သူတိုႛကိုယ်တိုင်ူပှူာန်းထားတဲ့ ဆိံ္ဋခံယူပြဲဥပဒေကို ခဵြိးဖေၝက်္ဘပီး ၀န်ထမ်းတေကြို သက်ဆိုင်ရာဌာနတေမြာ၊ ဆရာ ဆရာမတေကြို သက်ဆိုင်ရာကေဵာင်းတေမြာ မဲရုံဆောက်ခငြ့် မရြိဘဲ မဲရုံဆောက်္ဘပီး ဋ္ဌကိတြင်မဲပေးခိုင်းနေတာဟာ ဋ္ဌကီးမားတဲ့ မတရားမပြၝပဲ။ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို ဝေဖန်ရင် ထောင်ဒဏ်တသက်တကဋ္ဋန်း၊ ဆိံ္ဋခံယူပြဲကိုြေိာံက်ယက်ြရင် ထောင်ဒဏ် ၃ိံစြ် စတဲ့ ဥပဒေတေနြဲႛ လည်း ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေ အတည်ူပြိုံင်ရေး အကာအကယြ် ပေးထားပၝသေးတယ်။ ဒၝအူပင်ိုံင်ငံတကာက တောင်းဆိုတဲိုံ့င်ငံတကာအကဲခတ်မဵား ဆိံ္ဋခံယူပြဲကို လေ့လာစောင့်ုကည့်ခငြ့်ရရေး တောင်းဆိုခဵက်ကိုလည်း နအဖကူငင်းပယ်ထားပၝသေးတယ်။
အဋ္ဌကီးမားဆုံး လိမ်လည်မတြေကြတော့ ဆိံ္ဋခံယူပြဲ ကဵင်းပတဲ့နေႛ မေ ၁၀ ရက်နဲႛ နောက်ရက်တေမြာူဖစ်မြာပၝ။ နအဖရဲႛ ဆိံ္ဋခံယူပြဲ ဥပဒေအရ မဲရုံတေမြာ မဲစာရင်းအိုံင်အရြံးကို ထုတ်ူပန်ေုကူငာခငြ့် မရြိပၝဘူး။ ဆိုင်ရာမဲရုံမဵားရဲႛ မဲစာရင်းအိုံင်အရြံးကို သက်ဆိုင်ရ္ဘာမြိႛနယ်ကော်မရင်ြက လက်ခံစုဆောင်း္ဘပီး သက်ဆိုင်ရာူပည်နယ်/တိုင်းကော်မရင်ြမဵားထံပိုႛ၊ ယင်းတိုႛမတြဖန် ဗဟိုကော်မရင်ြကို ပိုႛ္ဘပီုးကပ်ေူပး နေူပည်တော်မြာ အေူခစိုက်တဲ့ ဗဟိုကော်မရင်ြကမြ ဒီကိန်းဂဏန်းမဵားကို ပေၝင်း္ဘပီး အိုံင်အရြံးေုကူငာမြာပၝ။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ဆိံ္ဋခံယူပြဲကဵင်းပရေး ဗဟိုကော်မရင်ြရဲႛ ဥက္ကှူ ဦးအောင်တိုးဟာ အမဵြိးသားညီလာခံကဵင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲႛ ဥက္ကှူ လည်ူးဖစ်၊ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေမူုကမ်း ရေးဆြဲရေးကော်မရင်ြရဲႛ ဥက္ကှူလည်ူးဖစ်္ဘပီး၊ ကော်မရင်ြအဖြဲႛ၀င်တေဟြာလည်း နအဖက စိတ်တိုင်းကဵ ရြေးခဵယ်ထားတဲ့ လူတေပြၝ။ ဗဟိုကော်မရင်ြက အဆင့်ဆင့် တင်ူပလာတဲ့ မဲစာရင်းမဵားကို ပေၝင်းစပ်ရေတက်ြရာမြာလည်း မည်သူကမြ စောင့်ုကပ်လေ့လိာိုံင်မြာ မဟုတ်ပၝ။
ဒၝေုကာင့် အုကီးမားဆုံး လိမ်လည်မြုကီးဟာ ဆိံ္ဋခံယူပြဲအ္ဘပီး နောက်တပတ်ခန်ႛ အုကာုကပ်ေူပး နေူပည်တော် ဗဟိုကော်မရင်ြက မဲစာရင်း ထုတ်ူပန်ေုကူငာတဲ့အခၝမြာူဖစ်ပၝလိမ့်မယ်။ ကန်ႛကက်ြမဲတြေ ဘယ်လောက်ပဲမဵားမဵား ဖြဲႛစည်းပုံ အေူခခံဥပဒေကို အိုံင်ပေး အတည်ူပမြာပၝ။
ဆိံ္ဋခံယူပြဲကဵင်းပတဲ့နေႛ ညနေဖက် မဲရုံပိတ်ခဵိန်မြာ မဲရုံမြးနဲႛအဖြဲႛက မဲပုံးထဲက မဲတေကြို ရေတက်ြပၝလိမ့်မယ်။ ဥပဒေအရ မဲရေတက်ြတဲ့ အခဵိန်မြာ အနည်းဆုံး ၁၀ ဦးထက် မပိုတဲ့ မဲပေးခငြ့်ရြိသူတေရြေႛမြောက်မြာ ရေတက်ြရမြာူဖစ်ပေမယ့် ဋ္ဌကံႛဖြံႛနဲႛ စမြ်းအားရင်ြတေသြာ အဲဒီ ၁၀ ဦူးဖစ်မြာပၝ။
ရေတက်္ဘြပီးတဲ့နောက် မဲစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကကြ်/ကေဵးရြာကော်မရင်ြထံ တင်ပိုႛရမြာပၝ။ ရပ်ကကြ်/ကေဵးရြာ ကော်မရင်ြတေကြ သူတိုႛထံရောက်လာတဲ့ မဲရုံအသီးသီးက စာရင်းတေကြို စုပေၝင်း္ဘပီး္ဘမြိႛနယ်ကော်မရင်ြတေထြံ တင်ူပ၊္ဘမြိႛနယ် ကော်မရင်ြတေကြ ကေဵးရြာ/ရပ်ကက်ြကော်မရင်ြမဵားက တင်သငြ်းတဲ့ မဲစာရင်းတေကြို ထပ်ပေၝင်း္ဘပီး သက်ဆိုင်ရာူပည်နယ်/တိုင်း ကော်မရင်ြကိုတင်၊ူပည်နယ်/တိုင်းကော်မရင်ြက သက်ဆိုင်ရ္ဘာမြိႛနယ်မဵားက တင်ူပလာတဲ့ မဲစာရင်းမဵားကို ထပ်ပေၝင်း္ဘပီုးကပ်ေူပး နေူပည်တော်က ဗဟိုကော်မရင်ြကိုတင်၊ုကပ်ေူပးနေူပည်တော် ဗဟိုကော်မရင်ြကူပည်နယ်/တိုင်းကော်မရင်ြမဵားက တင်ပိုႛလာတဲ့ မဲစာရင်းမဵားကို ထပ်ပေၝင်း၊ အဲဒၝကိုမြ အရင်ရရြိထားတဲု့ကိတြင်မဲမဵားကို ထပ်မံပေၝင်းစပ်္ဘပီး နောက်ဆုံးပိတ် မဲစာရင်းကိုေုကူငာမြာပၝ။
ဒၝေုကာင့် မဲရုံပိတ်တဲ့ညနေက စ္ဘပီး မဲရုံမြးမဵားနဲႛ ကော်မရင်ြအဆင့်ဆင့်ရဲႛ လိမ်လည်ပြဲုကီး စပၝ္ဘပီ။ မဲရုံမြးတေအြဆင့်မြာ လိမ်လိုႛခက်ရင်တောင်မြ အဲဒီမဲစာရင်းတြေ ကေဵးရြာ/ရပ်ကက်ြကော်မရင်ြအရောက်မြာ စတင်လိမ်လိုႛ ရပၝ္ဘပီ။ အဲဒီနောက်္ဘမြိႛနယ်ကော်မရင်ြတေကြ ထပ်လိမ်၊္ဘပီးတောူ့ပည်နယ်/တိုင်းကော်မရင်ြတေကြ ထပ်လိမ်နဲႛုကပ်ေူပးနေူပည်တော် ဗဟိုကော်မရင်ြကုကိတြင်မဲမဵားနဲႛ ထပ်ပေၝင်း လိမ်လည်္ဘပီးတဲ့နောက်မြာတော့ နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေဟာ ထောက်ခံမဲ ၁၀၀%၊ ကန်ႛကက်ြမဲ မရြိနဲႛ အတည်ူပြိုံင်မြာပၝ။
၃ – ဒီလိုဆိုရင် ?
အဲဒီလိုဆိုရင် အခု ကဵနော်တိုႛက လူထုကို ကန်ႛကက်ြမဲပေးဖိုႛ စည်းရုံးနေတာ၊ ကန်ႛကက်ြမဲတြေ ပေးနေုကတာ ဘာထူးမြာလည်း တခဵြိႛက မေိးိုံင်ပၝတယ်။ တိုံင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲႛ ကန်ႛကက်ြမဲပေးဖိုႛ စည်းရုံးနေတာ၊ မေုကာက်မရြံႛ ကန်ႛကက်ြမဲပေးနေုကတာ၊ အဖမ်းအဆီး အိုံင့်အထက်ူပမြမြဵားကို ရင်ဆိုင်ရ္ဘပီး လပ်ြရြားနေုကတာဟာ နအဖရဲႛ အဓမ္ထအတည်ူပမြကြို ကန်ႛကကြ်ိုံင်ဖိုႛနဲႛ နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံကို အသိအမတြ် မူပဖြိုႛ အတက်ြပၝ။
နအဖက ဒီဖြဲႛစည်းပုံကို ဘယ်လိုပဲ လိမ်လည်အတည်ူပြူပြ၊ူပည်သူလူထုက လက်မခံရင်၊ိုံင်ငံတကာအစိုး ရတေကြ လက်မခံရင်၊ ဘယ်လိုမြ ဒီဥပဒေကို အသက်သငြ်းလိုႛ မရိုံင်ပၝဘူး။ အခုကစလိုႛ ဆိံ္ဋခံယူပြဲလုပ်တဲ့နေႛအထိ လူထုလပ်ြရြားမတြေ ဟာ နအဖရဲႛ မသမာမတြေကြို ဖေၞထုတ်ရင်း လူထုရဲႛ လက်မခံမတြေကြို ထုတ်ဖေၞူပသနေတာပၝ။ အဲဒီနောက်မြာတော့ နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံ ကိုိုံင်ငံတကာက အသိအမတ်ြမူပရြေး ဆက်္ဘပီး လပ်ြရြာုးကရမြာပၝ။
စကတည်းက ကဵနော်တိုႛက ဒီဖြဲႛစည်းပုံကို မကန်ႛကက်ြခဲ့ဘူး၊ မူငင်းဆန်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီဖြဲႛစည်းပုံ အတည်ူပ္ဘြပီးသြားတဲ့အခဵိန်မြာ ဒီဖြဲႛစည်းပုံ အသက်ဝင်လာမကြိုငင်းဆန်ကန်ႛကကြ်ိုံင်တော့မြာ မဟုတ်ပၝဘူး။
အခုဆိုရင် ဒီဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေရဲႛ မတရားမတြေကြို ကဵနော်တိုႛအားလုံးကူမန်မာူပည်သူတေရြော ကမ္တာူ့ပည်သူတေရြော အားလုံး သိအောင် ထုတ်ဖေၞူပသိုံင်ုကသလို ဒီဖြဲႛစည်းပုံ အတုအယောင်ကို လုံးဝလက်မခိံိုံင်ဘူးဆိုတဲူ့မန်မာူပည်သူမဵားရဲႛဆိံ္ဋတေကြိုလည်း ကမ္တာကသိအောင်ူပိုံင်ုကပၝ္ဘပီ။ ဆိံ္ဋခံယူပြဲရက်တောင် မရောက်သေးပၝဘူး။ စကဿာပူ၊ ဂဵပန်၊ ထိုင်း၊ မလေးရြား၊ အဂဿလန်၊ူပင်သစ်စတဲူ့ပည်ပရောက်ူမန်မာမဵားက သူတိုႛရဲႛဆန်ႛကဵင်မကြိုိုံင်ငံတကာအစိုးရမဵား၊ူပည်သူမဵားသိအောင် ထုတ်ဖေၞူပသ္ဘပီ၊ူပသနေုကဆဲပၝ။ ဒီအရြိန်အဟုန်ဟာ ဆက်လက်ူမင့်မားန္ဘေပီး မေ (၁၀)ရက်နေႛမြာတောူ့မန်မိာိုံင်ငံတငြ်းကူပည်သူသန်းပေၝင်းမဵားစြာရဲႛ လူထုဆိံ္ဋ ထုတ်ဖေၞူပသပြဲဋ္ဌကီူးဖစ်လာတော့မြာပၝ။ နအဖဟာ ဆိံ္ဋခံယူပြဲရလဒ်ကို လိမ်လိုႛရပေမယ့်ူမန်မာူပည်သူလူထုရဲႛ ကန်ႛကက်ြမြ၊ူငင်းဆန်မြ ကို ဘယ်လိုမြ ဖုံးကယ်ြလိုႛ မရိုံင်ပၝဘူး။
တခဵိန်တည်းမြာပဲ ဆိံ္ဋခံယူပြဲ ကဵင်းပရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲႛ မသမာမတြေကြို ကဵနော်တိုႛ ဖေၞထုတ်ခဲ့၊ ဖေၞထုတ်ဆဲ၊ ဖေၞထုတ်နေုကတာပၝ။ မတရားတဲူ့ပစ်ဒဏ်၊ မမ္တွတတဲ့စည်းရုံးမြ၊္ဘခိမ်းခေဵာက်မြ၊ အုကပ်ကိုင်မြ၊ လိမ်လည်မတြေအြူပင် သန်းပေၝင်းမဵားစြာသောူပည်ပရောက်ူမန်မိာိုံင်ငံသားတေကြို မဲပေးခငြ့် ကန်ႛသတ်မတြေ၊ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေမူုကမ်းကို လေ့လာခငြ့်မရမတြေဟြာူဖင့် ဒီဆိံ္ဋခံယူပြဲဟာ မတရား မမ္တွတဘူးဆိုတာကို အတိအလင်း သက်သေူပနေတာပၝ။
ဒီတော့ ဒီဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကိုယ်ိံက်ြရဲႛ မတရားမြ၊ ဆိံ္ဋခံယူပြဲကဵင်းပရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲႛ မတရားမမ္တွတမနြဲႛ လူထုရဲႛူငင်းဆန်ကန်ႛကကြ် မတြေဟြာူဖင့် နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံကိုမန်မာူပည်သူမဵားအားလုံးကရော၊ိုံင်ငံတကာအစိုးရမဵားကပၝ အသိအမတြ် မူပြုကဖိုႛ လုံလောက် ခိုင်မာတဲ့ အေုကာင်းတရားတေပြၝပဲ။္ဘပီးတော့ ကဵနော်တိုႛဟာ နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေတခုတည်းကိုပဲ ကန်ႛကကြ်ူငင်းပယ်တာ မဟုတ်ပၝဘူး။ နအဖ စစ်အာဏာရင်ြစနစ်ုကီးတခုလုံးကိုပၝ ကန်ႛကကြ်ူငင်းပယ်ုကတာပၝ။
၄ – အရြိန်အဟုန်ူမငြ့်ုကစိုႛ
ကဵနော်တိုႛရဲႛ လပ်ြရြားမတြေကြို နောက်တဆင့် တက်ရပၝတော့မယ်။ မေလ ၁၀ ရက်ကို ဦးတည်္ဘပီး ဆိံ္ဋခံယူပြဲမြာ ကန်ႛကက်ြမဲတြေ ပေုးကဖိုႛ စည်းရုံးလြံႛဆော်နေုကတာတေကြို မေ ၁၀ ရက် နောက်ပိုင်း နအဖက ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို အတည်ူပြေုကာင်း တဖက်သတ်ေုကူငာမြာကို ဋ္ဌကိတြင်တုန်ႛူပန်မတြေနြဲႛ ပေၝင်းစပ်ပေးဖိုႛ လိုပၝ္ဘပီ။ ကဵနော်တိုႛ လုပ်သင့်တာကိုမန်မိာိုံင်ငံတငြ်းကူပည်သူႛလတ်ြတော် ကိုယ်စားလယ်ြမဵားက အဋ္ဌကူံပထြား္ဘပီးပၝ္ဘပီ။
မတ်လ ၃၁ ရက်နေႛကူမန်မိာိုံင်ငံတငြ်းကူပည်သူႛလတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားက ကမ္တာတ၀မြ်းမြ လတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားထံ ပန်ုကားလြာတစောင် ထုတ်ူပန်ပၝတယ်။ အဲဒီပန်ုကားလြာမြာူမန်မာူပည်သူႛလတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားကိုယ်စား ဦးပူကဵင်ရငြ်းထန် ဦးဆောင်တဲ့ လတ်ြတော်ကိုယ်စားလယြ် ၁၄ ဦးက လက်မတ်ြရေးထိုးထားပၝတယ်။ သူတိုႛက ကမ္တာတ၀မြ်းက လတ်ြတော်ကိုယ်စားလယြ် တေကြို
၁။ နအဖစစ်အုပ်စုအပေၞ စီးပြားရေး၊ သံတမန်ရေး ဖိအားပေးမမြဵာူးပလြုပ်ဖိုႛ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမဵားအား တိုက်တနြ်းပေးရန်၊
၂။ နအဖစစ်အုပ်စု၏ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို အသိအမတြ် မူပြေုကာင်းေုကူငာရန်ိံငြ့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမဵားအား အလားတူ တိုက်တနြ်းရန်၊
၃။ ကမ္တာ့ကုလသမဂ္ဂလုံ္ဘခံရြေးကောင်စီမြ မလြဲမသြေ လိုက်နာရမည့် ဆုံူးဖတ်ခဵက်မဵား ခဵမတ်ြရေးအတကြ် တိုက်တနြ်းရန်ိံငြ့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဵားအားလည်း အလားတူ တောင်းဆိုရန်၊
၄။ နအဖစစ်အုပ်စုအား ကမ္တာိုံ့င်ငံမဵားမြ လက်နက်ရောင်းခဵမြ ပိတ်ပင်ရေးအတကြ် တောင်းဆိုရန်ိံငြ့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမဵားအား လည်း တိုက်တနြ်းရန်၊ နအဖစစ်ခေၝင်းဆောင်မဵားအပေၞ ဘ္ပာရေိးံငြ့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛမမြဵာူးဖင့် အရေးယူရန်၊
၅။ူမန်မာ့အရေး ကုလသမဂ္ဂလုံ္ဘခံရြေးကောင်စီတငြ် အူခာိးိုံင်ငံမဵာိးံငြ့် ပူးပေၝင်း၍ အူပသြဘောဆောင်ရက်ြရေးအတကြ် တရုတ်အစိုးရအား ဖိအားပေးရန်ိံငြ့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရမဵားအားလည်း အလားတူ ဆောင်ရက်ြရေး တိုက်တနြ်းရန် စသူဖင့် ပန်ုကားထားပၝတယ်။
ူပည်တငြ်းက လတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားက ရဲရဲရင့်ရင့်နဲႛိုံင်ငံတကာလတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားထံ တင်ူပတောင်းဆိုလိုက်တာပၝ။ သူတိုႛရဲႛတောင်းဆိုခဵက်တြေ၊ ပန်ုကားခဵက်တေကြို ကဵနော်တိုႛက သူတိုႛကိုယ်စား ကဵနော်တိုႛရောက်ရြိရိာိုံင်ငံတေကြ လတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားထံ လက်ဆင့်ကမ်း တင်ူပပေးရင်း အဓိက တောင်းဆိုခဵက်ူဖစ်တဲ့ နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကို အသိအမတြ် မူပရြေး ဖိအားပေုးကရမြာပၝ။
အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုမြာတော့ Rush Holt, Berman, Ros-Lehtinen စတဲ့ အောက်လတ်ြတော် အမတ်မဵားကူမန်မာလတ်ြတော်ကိုယ်စားလယ်ြမဵားရဲႛ ပန်ုကားခဵက်ကို တုန်ႛူပန်တဲ့ ဥပဒေမူုကမ်းတရပ် ကို အောက်လတ်ြတော်မြာ တင်သငြ်းလိုက်ပၝ္ဘပီ။ မေ ၁၀ ဆိံ္ဋခံယူပြဲ မတိုင်ခင် မဲခြဲဆုံူးဖတ်ိုံင်မြာပၝ။ ဒီဥပဒေမူုကမ်းမြာ အမေရိကန်အောက်လတ်ြတော်အမတ် မဵားက နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကိုပစ်တင်ဝေဖန်္ဘပီး ဒီဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံ ဥပဒေကို နအဖက လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲရဲႛရလဒ်အူဖစ်ေုကူငာမယ် ဆိုရင် အသိအမတ်ြမူပဖြိုႛ အမေရိကန်သမ္ထတကို တိုက်တနြ်းထားပၝတယ်။
ဂဵပန်ိုံင်ငံမြာလည်း အလားတူ ဥပဒေမူုကမ်းတရပ်ကို တင်သငြ်ိးိုံင်ဖိုႛ ဋ္ဌကြိးစားနေုကပၝတယ်။ အဲဒီလို ဥပဒေမူုကမ်းကို စကဿာပူမြာ၊ ထိုင်းမြာ၊ ကိုးရီးယားမြာ၊ မလေးရြားမြာ၊ုသစေုတးလဵမြာ၊ ကနေဒၝမြာ၊ အိံ္ဋိယမြာ၊ ဖိလစ်ပိုင်မြာ၊ အင်ဒိုနီးရြားမြာ၊ အဂဿလန်မြာ၊ူပင်သစ်မြာ၊ိုံင်ငံတကာပၝလီမန်တေမြာ တင်သငြ်ိးိုံင်ုကမယ်၊ အနည်းဆုံး သက်ဆိုင်ရာ ပၝလီမန်အမတ်တေကြ နအဖရဲႛ ဖြဲႛစည်းပုံအေူခခံဥပဒေကိုရော ဆိံ္ဋခံယူပြဲ လုပ်ငန်းစဉ်တေကြိုပၝူပစ်တင်ဝေဖန်ရတ်ြခဵုကမယ်ဆိုရင်ူမန်မိာိုံင်ငံကို စစ်ကဋ္ဋန်ူပရြေး ဖြဲႛစည်းပုံဟာ ဘယ်လိုပဲ လိမ်လည်္ဘပီး အတည်ူပြူပြ၊ အသက်ဝင်လာဖိုႛ အလနြ်ႛအလန်ြကို ခက်ခဲပၝလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတနေႛ ဒီဖြဲႛစည်းပုံဟာ သမိုင်းရဲႛ အမိကြ်ူခင်းဋ္ဌကီးထဲကို ရောက်သြားဖိုႛတောင် ရြိပၝတယ်။
၅ –္ဘပိင်ြတူရုန်းလ္တွင် ရြေႛိုံင်ပၝသည်။
နအဖက လူထုကို စိန်ခေၞသလို လူထုကလည်း နအဖကို တုန်ႛူပန်ရင်ဆိုင်နေပၝ္ဘပီ။ုကပ်ေူပးနေူပည်တော်က ဗိုလ်ခဵပ်ြတြေ အိပ်မက်ဆိုးတြေ မက်နေုကပၝ္ဘပီ။ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖြဲႛမဵားကအစ တပ်မတော်မိသားစုဝင်မဵားအထိ လူထုဖက်ကရပ်တည်ဖိုႛေူခလမြ်ူးပင်နေုကပၝ္ဘပီ။ ကဵနော်တိုႛ တယောက်လက်ကိုတယောက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ခဵိတ်ဆက်ထားရင်ူဖစ်ပေၞလာမယ့် အင်အားဟာ ဗိုလ်သန်းရေရြဲႛ စစ်အုပ်စုကိုေုကာက်ဖဵား ဖဵားစေမြာပၝ။ အသက်ကို နက်နက်ရိငြ်းရိငြ်းရြ၊ လက်တေကြို ခိုင်ခိုင်္ဘမ္ဘဲမဲဆုပ်၊ နောက်ူပန်မရုပ်တဲ့ေူခလမြ်းမဵားနဲႛ္ဘပိင်ြတူရြေႛလဵာုးကပၝစိုႛ။ ။
(စာရေးသူ အောင်ဒင်သည် အမေရိကန်အေူခစိုက်သည့် “အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုမန်မာ့အရေးလပ်ြရြားမအြဖြဲႛ” ၊ U.S. Campaign for Burma ၏ မူဝၝဒဆိုင်ရာ ဒၝရိုက်တာတဦးအူဖစ် ဆောင်ရက်ြနေသူဖစ်သည်)
Posted by maungyit on April 30, 2008 in Op-Ed
Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ သို့
ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၀၈
ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကို အခုလို စာဖွဲ့ပြီး အမှတ်တရ မှတ်သားထားမိပါတယ်။
မသတ်ရဲ သတ်ပွဲရှောင်ကြတယ်။ ။”
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦကောဝိဒကို ပူဇော်တဲ့ ပါဠိဂါထာ အသွား၊ ၈ လုံးဘွဲ့ ကဗျာက ဒီလိုပါ။
(မောင်စွမ်းရည်၊ ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၀၈၊ ညီမူရာ ခန်းမ၊ သာသနမောဠိ ဌာနချုပ်။)
Posted by maungyit on April 30, 2008 in Maung Swan Yi
Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးကောဝိဒ ပျံလွန်တော်မူကြောင်း သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ်က သတင်းထုတ်ပြန်
မိံ္ဇလေး္ဘမြိႛ၊ မစိုးရိမ်ကေဵာင်းတိုက်၊ မဟာနာယကအဖြဲႛ၀င်၊ ပၝဠိအဘိဓာန်ကဵမ်ိးံငြ့် မစိုးရိမ် ပၝရာဇိ ကဏ်ေူဖ၊ မစိုးရိမ် သီလက္ခန်အေူဖ၊ မစိုးရိမ် အှူသာလိနီအေူဖကဵမ်ူးပြ၊ သာသနမောဠိ အူပည်ူပည်ဆိုင်ရာူမန်မာရဟန်းတော်မဵားအဖြဲႛခဵပြ် ပဓာနာစေရဆရာတော်၊ စာခဵအကေဵာ် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီး ဦးကောဝိဒၝဘိဝံသည်ူမန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခု ၊ တန်ခူးလူပည့်ကေဵာ် (၉) ရက်၊ ခရစ်ိံစြ် ၂၀၀၈ ခု၊ ဧ္ဘပီလ ၂၉ ရက်၊ အဂဿၝနေႛ နယူးယောက်စံတော်ခဵိန် နေႛလည် (၁) နာရီ (၇) မိနစ်အခဵိန်တငြ် အမေရိကန်ိုိံင်ငံ ၊ နယူးယောက်ူပည်နယ် ၊ နယူးယောက်္ဘမြိႛ၊ Coney Island ဆေးရုံဋ္ဌကီးတငြ် တစ်ဘ၀ခိံ္ဌ္ဘာငိမ်းတော်မူေုကာင်း အနီးအဝေး တပည့်တကာ တကာမ အပေၝင်းအား အေုကာင်ုးကားအပ်ပၝသည်။ စဵာပနအစီအစဉ်မဵားကို အသေးစိတ်ထပ်မံေုကူငာပၝမည်ဟု ဗဟိုပန်ုကားရေးက ထုတ်ူပန်ထားပၝသည်။
မိုးမခက ထပ်မံဝင်ရောက်လာသော အီးမေးသတင်းများအရ သာသနမောဠိ ပဓာနာစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးကောဝိဒ ဈာပနအခမ်းအနား အစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
မေလ ၃၊ ၂၀၀၈၊ စနေ့နေ့၊ ညနေ ၈ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ နှင့် မေလ ၄၊ ၂၀၀၈၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ မနက် ၁၀ နာရီ – ည ၈ နာရီ၊ နေရာ – မစ်ဒ်ဝှဒ် ချပ်ပယ်၊ Midwood Chapel, 1625 Coney Island Ave, Brooklyn, NY 11230 ဟု သိရပြီး၊ မီးလောင်တိုက်သွင်းမည့် နေ့မှာ – မေလ ၅၊ ၂၀၀၈၊ နေရာ –Greenwood Crematory, 500 25th Street, Brooklyn, NY 11232 ဟု သတင်းတခုက ဆိုသည်။
အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။ သာသနမောဠိ အဖွဲ့ချုပ် အင်တာနက် စာမျက်နှာ (http://sasanamoli.org) တွင်လည်း ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဟု သာသနမောဠိဆရာတော်များ၏ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဆိုထားပါသည်။
သာသနမောဠိ နာယက မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပျံလွန်တော်မူပြီ
မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၁
သက်တော် ၈၁ ရှိပြီဖြစ်သည့် မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒ သည် ယနေ့ နေ့ခင်း၊ နယူးယောက်စံတော်ချိန် ၁ နာရီ ၇ မိနစ်ခန့်က ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူပြီဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ယနေ့ နံနက်က နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာဖြင့် ဆေးရုံသို့ အမြန်တင်ပို့ခဲ့ရကြောင်း၊ ထိုနောက် ဆေးရုံတွင် ကုသမှုများဆောင်ရွက်နေစဉ် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ခန္တာဝန်ချတော်မူသည်ဟု ဆရာတော်ကြီး၏ ဝေယျဝစ္စအနီးကပ်ဆောင်ရွက်ပေးသူ ဦးတင်မျိုးအောင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က နယူးယောက် သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ် ခန်းမဖွင့် အခမ်းအနားကိုလည်း ကြွရောက်ပြီး တရားချီးမြှင့်ခဲ့သေးကြောင်း၊ သက်တော်ကြီးရင့်ပြီး ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေသည့်ကြားက သာသနာ့ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်၊ သံဃာတော်များကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် အထူးလုံလပြုတော်မူပြီး ဆရာတော်ကြီးသည် သာသနမောဠိ – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာရဟန်းတော်များ အဖွဲ့ချုပ်ကို မနေမနား ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့ကြောင်း၊ သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ်က ဆရာတော်တပါးဖြစ်သူ ဦးပညာနန္ဒက မိုးမခသို့ ပြောကြားသည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ အန္တိမဈပန ကိစ္စအ၀၀ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သာသနမောဠိ ဥက္ကဌဆရာတော် ပီနန်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးပညာဝံသနှင့် အတွင်းရေးမှူးဆရာတော် ဦးဥတ္တရတို့သည် ယခု နယူးယောက်သို့ လာရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ဆရာတော်ကြီးနောက်ဆုံး ကြွရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့သော သာသနမောဠိအဖွဲ့ချုပ်ခန်းမဖွင့်ပွဲတွင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက အခု သာသနမောဠိခန်မကြီးကို ရုံးခန်းအဖြစ် မမှတ်ယူစေလိုကြောင်း၊ သံဃာတော်များ သာသနာ့အရေး ကာကွယ်ရေး စုဝေးညီညာ ဆောင်ရွက်ရာဖြစ်တဲ့အတွက် “ညီမူရာ” ခန်းမ လို့ အမည်ပေးစေလိုကြောင်း၊ မိမိတို့သံဃာတော်တွေက သာသနာ့အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ဖို့၊ မြန်မာပြည်မှာ သာသနာထွန်းကားဖို့ လုံလထုတ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်လို့ အခြား လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လည်း မရောထွေးကြစေလိုကြောင်း၊ သံဃာ့ဂုဏ်တော်များကို အခြားတပါးသူများက ဂုဏ်ချင်း ယှဉ်ကြ၊ ပြိုင်ကြတာမျိုးကိုလည်း လက်မခံကြစေလိုကြောင်း၊ သံဃာသတ်တဲ့ စစ်အစိုးရချမှတ်ပေးနေတဲ့ အခြေဥပဒေမူကြမ်းမကလို့ ဘယ်လမ်း ဘယ်စခန်းကိုမှ နောက်က လိုက်ပါဆွေးနွေးပြောဆိုနေစရာ မလိုဘဲ လုံးဝပယ်ချ ကန့်ကွက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ စိတ်ကို ပိုင်ပိုင်ထား ဆုံးဖြတ်ထားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်ဟု အခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့သူ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်က မိုးမခသို့ ပြောကြားသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် ၁၉၉၀ ကစတင်ပြီး စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခဲ့သော ဦးဆောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ စစ်အစိုးရက ဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွ စာသင်သား၊ စာချ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်အများအပြားကို ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင် ထောင်ထဲတွင် ၂၂ လ တိုင်တိုင် အကျဉ်းစံခဲ့ရပြီး၊ ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် မူလ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတွင် ဦးဆောင်ဆရာတော်ကြီးအဖြစ် စာသင်၊ စာချ သာသနာ့ တာဝန်များကို ပြန်လည် ထမ်းရွက်တော်မူခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ငွေကြာရံ စာသင်တိုက် ( ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာတွင် စစ်တပ်က အကြမ်းဖက်စီးနင်းပြီး သံဃာတော်များကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း) တွင်လည်း အခါအားလျော်စွာ စာချပေးတော်မူပြီး ဆရာတော်ကြီးသည် မြန်မာပြည်ရှိ စာသင်သား သံဃာတော်များအတွက် နေတစင်း၊ လတစင်းသဖွယ်အဖြစ် ပရိယတ္ထိနယ်ပယ်တွင် ကျေးဇူးသြဇာ ကြီးမားသူဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာတွင် စစ်အစိုးရက သံဃာတော်များကို လက်နက်ဖြင့် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်နှိမ်နှင်းသောအခါ ဆရာတော်ကြီးသည် သာသနာနှင့် သံဃာတော်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ဘုရားရှင်ချမှတ်တော်မူသော သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ခြင်းကို ထောက်ခံဆောင်ရွက်အားပေးတော်မူပြီး မိမိ ခြိုးခြံနေထိုင် တရားကျင့်ကြံ ဟောပြောခြင်းမှ ဖြစ်တော်မူသော ရုပ်ပစ္စည်းနှင့် ၀တ္ထုအစုစုတို့ကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သံဃာတော် အရေးကိစ္စတို့အတွက် စွန့်လှူပြီး ဆောင်ရွက်သော ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သည်။
သာသနမောဠိ – သံဃာအဖွဲ့ချုပ်ကြီး ဖြစ်မြောက်လာစေရေးအတွက် အထူးဝါယမစိုက်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် သက်တော်ကြီး ၀ါတော်ကြီးသူ ဆရာတော်ကြီးကို သံဃာတော်အများက နာယကဆရာတော်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အနောက်ခြမ်း ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတက္ကသိုလ်က ပြည်တွင်းရှိ သံဃာအာဇာနည်များအတွက် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါရဂူဘွဲ့ကိုလည်း ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းသည့်ကြားမှ မြန်မာသံဃာတော်များကိုယ်စား ကြွရောက် လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီးက ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရသည်အထိ သပိတ်မှောက်ကံဆောင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်တော်မူသော ဆရာတော်တပါးအနေဖြင့် ပြည်တွင်းက တစိတ်တ၀မ်းတည်းဖြစ်သော မြန်မာသံဃာတော်များကိုယ်စား ဆုယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိအတွက် ဆုချီးမြှင့်ရန်မလိုကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။
ဆရာဝန်များ၊ အနီးကပ်စောင့်ရှောက်သူ ဒကာ၊ ဒကာမများက ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေမှုများကြောင့် အနားယူရန် အကြိမ်ကြိမ် တိုက်တွန်းခဲ့ကြသေည်လည်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ယခု သာသနာ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်၊ မြန်မာရဟန်းသံဃာတော်များကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် တာဝန်ကို သာသနာ့အရေး၊ တို့အရေးအဖြစ် ခံယူပြီး ဦးလည်မသုံဖြင့် မိမိ၏ အသက်ခန္တာကိုပင် မငဲ့ဘဲ သာသနာပြုစောင့်ရှောက်တော်မူသော ဆရာတော်ကြီးဖြစ်သည်။
မိုးမခ က တင်ဆက်ခဲ့သော ဆရာတော်ကြီးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ ဆောင်းပါးများကို ဒီနေရာက သွားဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
· မောင်စြွမ်းရည် – ကုံကီးထိုက်သူမဵားနဲႚိုံင်ငံရေး
· အရြှင်ဥာဏိက – သက်ဇိုဝ်းရာမက ရည်ြစေသော်
· Conversation with Sayadaw U Kovida – by Maia Duerr and Hozan Alan Senauke
· Speech by U Kovida at LA on 23rd Dec 2007
· U Kovida said Sangha’s Boycott is the only mean to succeed
· Sasana Moli appeal to International Community
· ဦးကောဝိဒုသ၀ၝဒပေး တရားပြဲမဵား
· USF honors Burmese Monks with their graduation
· U Kovida’s speech in detail at USF
· U Kovida’s Speech at USF to the monks in Burma and the World
· Masoeyane Monestery of Mandalay celebrate 100 year anniversary
· ဦးကောဝိဒ – အနီရင့်ရင့်ူမစ်တစင်း
· University of San Francisco to honor Burmese Buddhist Monks for their non vilolence protest
· Burmese Junta and cronies trying to divide Sasana Moli
· Burmese Monks in Overseas Formed Solidarity Front to support religious freedom in Burma
Posted by maungyit on April 29, 2008 in Local News Headlines
ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် စားဖိုဆောင်တငြ် အလုပ်မဵား
ဧ္ဘပီ ၂၉၊ ၂၀၀၉
ဧည့်ဝတ်ကေဵလနြ်းသော ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် ဆမတ် ဆန်ဒရာဝပ်
ူမန်မာဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် ဗိုလ်ခဵပ်ြဋ္ဌကီးသိန်းစိန်သည် ထိုင်ိးုိံင်ငံဘန်ကောက်္ဘမြိႚသိုႚ ယနေႚ နေႚလည်ပိုင်းတငြ် တရားဝင်အလည်အပတ် ရောက်ရိသြားရာ ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပ်ြက တပ်မတော်လေယာဉ်ကငြ်းတငြ် သြားရောက် ဋ္ဌကိဆြိုခင်းမရိခြဲ့ပၝ။ ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပ်ြသည် ဗိုလ်ခဵပ်ြသိန်းစိန်အားတည်ခင်းမည့် ယနေႚည ညစာစားပဲအြတကြ် ကိုယ်တိုင် ခဵက်ူပတ်ြစီစဉ်မည်ဟု ဆိုသည်။ “ယမန်နေႚနံနက်ကတည်းက ခဵက်ူပတ်ြရန်ပင်္စည်းမဵားကို သြားရောက်ဝယ်ယူထား္ဘပီူးဖစ်သည်ဟု သတင်းထောက်မဵားကိုေူပာုကားေုကာင်း” ဘန်ကောက်ပိုႚစ်သတင်းစာ အင်တာနက်စာမဵက်ြိာံတငြ် ဖော်ူပထားသည်။ သိုႚသော်လည်း မည်သည့် ဟင်းလဵာမဵားခဵက်ူပတ်ြမည်ကိုမူ ထုတ်ဖော်ေူပာဆိုခင်းမူပပြေ။ “ဒၝက လြဵြိႚ၀က်ြထားရမယ့်ဟာလေ။ူမန်မာအစိုးရက ဗိုလ်ခဵပ်ြသိန်းစိန် ဘယ်အစားအစာကို မဋ္ဌကိက်ြဘူးဆိုတာ ကဵပ်ြကို အသိပေးထား္ဘပီးသား။”ဟု ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပ်ြကေူပာဆိုေုကာင်း ဘန်ကောက်ပိုႚစ်က ရေးသားသည်။
ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပ်ြသည် ရုပ်ူမင်သုံကားဌာနတစ်ခုတငြ် ခဵက်နည်ူးပတ်ြနည်း အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအူဖစ် ဆောင်ရက်ြခဲ့ဖူးသည်။
ဘန်ကောက်သိုႚ ယနေႚရောက်ရိသြားသော ဗိုလ်ခဵပ်ြဋ္ဌကီးသိန်းစိန်ိံငြ့်အဖြဲႚ ဘန်ကောက်္ဘမြိႚအတငြ်း သြားရောက်လည်ပတ်နေစဉ်